Idi China Pipe Valves ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ndị na-eweta |Arex
Gịnị bụ valvụ?
Valve, na injinia injinia, ngwaọrụ maka chịkwaa ọsọ nke mmiri (mmiri, gas, slurries) na ọkpọkọ ma ọ bụ ogige ọzọ.Njikwa bụ site na ihe mbugharị na-emepe, mechie, ma ọ bụ gbochie oghere n'ụzọ ụzọ.Valves bụ ụdị isi asaa: globe, ọnụ ụzọ ámá, agịga, plọg (ọkụkụ), nru ububa, poppet, na spool.
Kedu ka valves si arụ ọrụ?
valvụ bụ ngwaọrụ arụ ọrụ nke na-egbochi ọkpọkọ ma ọ bụ n'ụzọ zuru ezu iji gbanwee oke mmiri na-agafe na ya.
Ebe a na-eji valvụ njikwa ngwa ahịa?
valvụ na-achịkwa bụ valvụ a na-eji ejikwa mmiri na-asọpụta site n'ịgbanwe nha nke ngafe na-erugharị ahụ dịka mgbama sitere na njikwa.Nke a na-enyere aka ịchịkwa ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ na njikwa nke usoro nhazi dị ka nrụgide, okpomọkụ, na ọkwa mmiri mmiri.
Kedu ụdị valves dị iche iche?
Ụdị valvụ dị iche iche dị: ọnụ ụzọ ámá, globe, plug, bọl, nru ububa, nlele, diaphragm, pinch, enyemaka nrụgide, valves njikwa wdg. Onye ọ bụla n'ime ụdị ndị a nwere ọtụtụ ụdị, nke ọ bụla nwere njirimara dị iche iche na ike ịrụ ọrụ.
Kedu ụdị valves dị iche iche a na-eji?
Nkwụnye valvụ (valvụ oche), valvụ bọọlụ, & valvụ nru ububa bụ ụdị valvụ ndị a na-ejikarị eme ihe na kpo oku, ikuku, na ikuku oyi.valvụ ndị ọzọ eji na sistemu gụnyere valvụ ọnụ ụzọ mma, valvụ diaphragm, na valvụ ọnụ ụzọ ámá.
Ụdị valvụ dị iche iche na-eji na mpaghara dị iche iche.n'isiokwu a kwuru 19 ụdị valves.
2. valvụ ọnụ ụzọ ámá
3. valvụ bọọlụ
4. valvụ urukurubụba
6. Nkwụnye valvụ
7. valvụ agịga
8. valvụ akụkụ
9. tuo valvụ
10. valvụ slide
11. Ghichaa valvụ ala
12. Solenoid valvụ
14. valvụ na-achịkwa mmiri
15. valvụ na-achịkwa nrụgide azụ
16. valvụ ụdị Y
18. valvụ na-achịkwa nrụgide
19. Lelee valvụ
Nke gara aga: Ngwakọta hydraulic
Osote: Ntupu ihuenyo dị mma nke polyurethane
© Nwebiisinka 20102021: Ikike niile echekwabara.> Njikọ Mgbasa Ọla Ntupu ihuenyo Njikọ Mgbasawanye Seismic Valve Control Pneumatic 50mm roba hose naagbanwe agbanwe Valve mmanụ ihe mmịfe Ngwaahịa niile